दक्षिणकाली माताको दर्शन गर्दै आजको राशिफल हेर्नुहोस:ॐ लेखेर सेयर गर्नुहोस।
September 7, 2020 September 7, 2020 adminLeaveaComment on दक्षिणकाली माताको दर्शन गर्दै आजको राशिफल हेर्नुहोस:ॐ लेखेर सेयर गर्नुहोस।
अन`न्त जीवनको ठू`लो म`हानतामा रमाइलो गर्नको लागि आफ्नो जीव`नलाई अझै उदा`त्त बनाउनुहोस्। चि`न्ता नहुनु यो दि`शामा पहिलो क`दम हो। एउटा नयाँ आर्थिक स`म्झौता त`य हुनेछ र नयाँ पैसा प्रा`प्त हुनेछ।
संल`ग्न भएकाहरूले आफ्नी भा`वि प`त्नीमा ठू`लो आ`नन्द पाउनेछन्। महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग बातची`त गर्दा आफ्ना कान र आँखा खु`ल्ला राख्नुहोस् – किनकि तपाईंले एउटा मूल्य`वान टि`प पाउन सक्नुहुन्छ।
आफ्नो सामाजिक जीवनलाई बेवा`स्ता नग`र्नुहोस्। आफ्नो व्य`स्त ता`लिकाबाट केही समय निकाल्नुहोस् र आफ्नो परिवारसँग पा`र्टीमा जानुहोस्। यसले तपाईंको द`बाब मात्रलाई रा`हत दिंदैन, हि`चकि`चाहट पनि हटाउँछ।
मो`मबत्तीको उज्या`लोमा प्रियसँग खाना खानुहोस्। अचा`नक अप्र`त्याशित ला`भ प्राप्त हुनाले वा ध`नको व´र्षा हुनाले व्यव`सायीहरूको लागि राम्रो दिन हो। ग`फ र अफ`वाहहरुबाट टाढा रहनुहोस्।
एउटा पुरानो मि`त्रले दिनको पछिल्लो भा´गमा रमाइलो भेट गर्नेछ। तपाईंको प्रे`म बहुमू`ल्य कुराहरू जस्तै ताजा राख्नुहोस्। तपाईंले नयाँ व्या`पार सा`झेदारीको वि`चार गर्दै हुनुहुन्छ भने –
त्यसपछि तपाईंले कुनै पनि प्रतिब`द्धता गर्नु अघि हातमा सबै त`थ्य प्रा`प्त गर्नु आ`वश्यक हुनेछ। तपाईंको इच्छा अनुसार सबै कुराहरू अगाडि बढीरहेको समयमा एउटा जो`डको हाँ`सोले दिनभरी खु´शी ल्याउँछ।
खानाले आफ्नो स्वादको लागि नूनको ऋ`ण लिएको हुन्छ – केही दुखको आ`वश्यकता पर्छ र त्यसपछि मात्रै तपाईंले आन`न्दको मूल्य मह`सुस गर्नुहुनेछ।
तपाईंको मु`ड परि`वर्तन गर्न केही सामाजिक जमघट´मा जानुहोस्। साथीहरूसँग रोमा`ञ्चक र मनोरंजक कुरा गर्ने सही दिन। प्रे`म सम्बन्धमा दा`स जस्तो व्य`वहार नगर्नुहोस्।
सबैको मद्दत गर्ने तपाईंको इ`च्छाले तपाईंलाई थकि´त र शक्ति`हीन बनाउनेछ। आफ्नो प्रे`मीसँग ब`दला लिने हुँदा कुनै पनि परि`णाम प्राप्त हुँदैन – बरु तपाईंले शान्तिसँग आफ्नो प्रे`मीसँग आफ्नो साँचो भा`वना पोख्नु पर्छ।
तपाईंको सहा`रामा धेरैले नि`र्भर गर्नेछन् र तपाईंलाई नि`र्णय लिनको लागि मनको स्प`ष्टता मह`त्त्वपूर्ण हुनेछ। आशिष् र राम्रो भाग्य तपाईंको बाटोमा आउनाले इच्छा पूरा हुनेछ –
र यो अघिल्लो दिनको क`ठिन कामको परि`णामले गर्दा हो। तपाईंमध्ये कसैले गहना वा घरको उप`करण ख`रिद गर्ने सम्भावना छ। अनपे`क्षित रोमा`न्टिक झुकावले बेलुकीतिर तपाईंको मन ढाक्नेछ।
तपाईंको स`हारामा धेरैले नि´र्भर गर्नेछन् र तपाईंलाई नि´र्णय लिनको लागि मनको स्पष्ट´ता मह´त्त्वपूर्ण हुनेछ। तपाईं अरूको लागि बढी ख´र्च गर्न चा´हनु हुनेछ। पुरानो सम्पर्क र सम्ब´न्ध पुनर्जी´वित गर्ने राम्रो दिन।
रो´मान्स सु´खद र अत्य´धिक रोमा´ञ्चक हुनेछ। तपाईंले आज आफ्नो काममा प्र´गति देख्न सक्नु हुनेछ। तपाईं र तपाईंको जो´डीलाई आज अच´म्मको समाचार प्राप्त हुन सक्छ।
तपाईंले आफ्नो दै´निक तालिकाबाट समय निकालेर आज आफ्ना साथीहरूसँग बाहिर जानुपर्छ। आज आफ्नी प्रि´यतमासँग शि`ष्टतासाथ व्यव´हार गर्नुहोस्। तपाईंले सही मानिसहरूलाई आफ्नो कौ`शल र प्र´तिभा देखाउनु भयो भने चाँडै नै नयाँ र राम्रो सार्वजनिक छ´वि बनाउनु हुनेछ।
आज तपाईं ऊ`र्जावा`न हुनु हुनेछ, तपाईंले जे गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईंले सा`धारण रूपमा गर्ने भन्दा आ´धी समयमा गर्न स`क्षम हुनुहुनेछ। यो`ग्यहरूका लागि वैवा´हिक साँ´ठगाँ´ठ हुनेछ।
यसको लागि केही समय लिनुहोस्। तपाईंले नयाँ व्यापार साझे´दारीको विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने – त्यसपछि तपाईंले कुनै पनि प्रतिब`द्धता गर्नु अघि हातमा सबै त´थ्य प्राप्त गर्नु आव`श्यक हुनेछ।
अरूसँग खुसी क्षणमा भा´गीदा´री हुनाले तपाईंको स्वास्थ्य फू´ल्नेछ। तर सावधान रहनुहोस्। यदि यसो गर्नुभएन भने तपाईंलाई पछि सम´स्या हुनेछ। परिवारमा तपाईंको हावी मनोवृ´त्ति परिव`र्तन गर्न सही समय हो।
जीवनको राम्रो र नराम्रो कुराहरू बाँट्न तिनीहरूसँग घनिष्ठ सहयोगमा काम गर्नुहोस्। तपाईं आज आफ्नो साथीको धु´कधु`कीसँग सम`न्वयन हुनुहुनेछ। हो, यो तपाईं प्रे`ममा हुनुहुन्छ भन्ने चिन्ह हो! नयाँ ग्राहकहरुसँग बातचीत गर्ने यो एउटा अद्भु´त दिन हो।
तपाईंमा अ´सीम ऊ´र्जा र उत्सा´ह आउनेछ र तपाईंले आफ्नो फाइ`दाको लागि कुनै पनि मौ´का प्र´योग गर्नु हुनेछ। तपाईंको नि`वेश र भवि`ष्यको लक्ष्यबारे गो´प्य हुनुहोस्।
नातिनातिनाहरू खुशी गराउने राम्रा स्रो´त हुनेछन्। तपाईंको ऊ´र्जाको स्त´र उ´च्च हुनेछ – किनकि तपाईंको प्रियले धेरै आनन्द लिएर आउनेछ। काममा तपाईंका प्रति´द्व`न्द्वीले आज आफ्ना नराम्रा कृ´त्यको परि´णाम प्राप्त गर्नेछन्।
विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस – कसैले तपाईंलाई धेरै नजिकबाट हेरिरहेको छ र तपाईंलाई विशेष व्य´क्ति ठान्दछ – प्रशं´सनीय कामहरू मात्र गर्नुहोस् जसले तपाईंको प्र`तिष्ठालाई अझै उठा´उन सक्छ।
यस दिनलाई एउटा विशेष दिन बनाउन थोरै प्रे`म र द`या दिनुहोस्। तपाईंले चि`नेका महिलाहरुको मार्फ´त कामको लागि अव´सर आउनेछ। साहारा संदेश बाट
रा,जनीतिमा महरा पुन आउदै:भन्छन् मलाई ष,ड्यन्त्र गरेर फ,साइयो,
मल किन्न सह,कारीमै ओच्छ्यान ! म,हंगोमा बेच्नेलाई कार,वाही भएन